Ku lifaaq AirTag Remote-ka Siri ee Apple TV-ga haddii aad leedahay daabacad 3D ah | Waxaan ka socdaa mac
El AirTag ayaa bixinaysa waxyaabo badan oo looga hadlo. Raadraacan yar ee Apple wuxuu leeyahay laba awood oo waaweyn si uu u noqdo aaladda ugu iibinta wanaagsan shirkadda marka loo eego tirada unugyada. Mid ka mid ah waa midnimadiisa. Way yar tahay, baytariguna wuxuu soconayaa sannad.
Ta labaadna waa qiimaha. Wixii 35 euross waxaad leedahay raad raac wanaagsan oo lagu dhisay nidaamka "Raadinta" Apple. Sidaas darteed haddii aad haysato daabacad 3D ah iyo wax yar oo male ah, hadda waxaad AirTag ku dhejin kartaa walxaha ugu kala duwan ee badanaa lumiya, sida kontoroolka fog ee Apple TV.
AirTag waxay suuqa ku jirtay kaliya toban maalmood iyo hadaad mid leedahay Yazici 3DWaxaad horeyba uga heli kartaa internetka dhamaan noocyada qorshayaasha si aad u sameysid taageero balaastig ah oo aad ugu lifaaqdo tracker Apple walxaha aad badanaa lumiso, ama aad ka baqeyso inaad sidaas sameyso.
Dhamaanteen ayey nagu dhacday. Waxaad kuhelaysaa guriga, waxaad kala soo baxaysaa sanduuqa, waxaadna la xiriiri kartaa iPhone-kaaga oo tijaabi. Markaad ku aragto ficil ahaan, maskaxdaadu waxay ku bilaabaneysaa inay kugu duqeyso dhammaan meelihii aad "ka" xiri lahayd mid ka mid ah. Waa inaad ogaataa in Apple aysan kuu oggolaanayn inaad maamusho wax ka badan 16 unug isticmaale kasta. Hadda
Waad ku daabacan kartaa daabacaad 3D ah
Isticmaalaha xariifka ah (PrintSpiredDesigns) ayaa sudhay madal wax iibsi iyo iib Etsy guri caag ah oo lagu sameeyay daabacaad 3D ah oo loogu talagalay in lagu xareeyo aaladda telefishanka Apple TV, iyo xagga dambe, AirTag. Fikrad weyn.
Marka mar dambe waali maysid adoo raadinaya Siri Remote. Iyada oo aad iPhone waxaad ka heli doontaa isla markiiba. Waxaad ku iibsan kartaa 13 Euro, ama waxaad kala soo bixi kartaa qorshaha STL ee 2 Euro ah adigana waad daabacan kartaa haddii aad leedahay daabacad 3D ah.
Haddii aad leedahay daabacad daabac ah oo 3D ah, ka raadi internetka waxaadna awoodi doontaa inaad hesho kiisas aan la tirin karin oo noocyo kala duwan leh oo ku lifaaqaya AirTag waxyaabo badan. Qandhada AirTag ayaa bilaabatay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Ku dheji AirTag Remote Siri ee Apple TV haddii aad leedahay daabacad 3D ah